သမီး​လေးစံရတီမြင့်​မိခင်​ရဲ့ရင်​ဖွင့်​​ပြောပြသံကို ရင်​နာနာနဲ့​​ရေးမိတာ မိတ်​​ဆွေတို့ကိုသိ​စေချင်​လို့ ပါ – Myanmar Breaking News
Homepage / All About Online / သမီး​လေးစံရတီမြင့်​မိခင်​ရဲ့ရင်​ဖွင့်​​ပြောပြသံကို ရင်​နာနာနဲ့​​ရေးမိတာ မိတ်​​ဆွေတို့ကိုသိ​စေချင်​လို့ ပါ
သမီး​လေးစံရတီမြင့်​မိခင်​ရဲ့ရင်​ဖွင့်​​ပြောပြသံကို ရင်​နာနာနဲ့​​ရေးမိတာ မိတ်​​ဆွေတို့ကိုသိ​စေချင်​လို့ ပါ
သမီး​လေးကတစ်​ခါမှ ဒုက္ခ မ​ပေးဘူးဘူး
​မွေးဖွားစဉ်​ကာလ ​တောရွာဆို​တော့ ​ရေမ​ပေါက်​ ကုန်းမ​ပေါက်​ ဟိုဘက်​ကမ်းက​ဆေးရုံကိုသွားဖို့ရာအတွက်​ခက်​ခဲတာရယ်​၊​တော​ဆေးရုံဆို​တော့ခွဲ​မွေးဖို့​သွေးလို​တော့ ​သွေးလှူ မည့်​အလှူရှင်​ကို​စောင့်​ရတရယ်​ဒါ​လေးဘဲခံခဲ့ရတာ​လေ…
မျက်​​စေ့​အောက်​က​နေကိုအ​ပျောက်​မခံခဲ့ဘူး၊သက်​မာစိုးက စာ​လေး​တွေဘာ​လေး​တွေလဲဖတ်​​တော့ က​လေးသူခိုး​တွေ​ကြောက်​​တော့ ​ချောင်းထဲ​ရေခတ်​သွားရင်​ကို အိမ်​မှာက​လေးကို​သော့ခတ်​ထားခဲ့တာ။
​သော့ခတ်​ထားလို့ က​လေးငိုရင်​ မ​သေဘူး ​လေ..
က​လေးသူခိုးတို့ ​ချောင်းထဲ​ရေနစ်​မှာတို့ဆို စိတ်​ပူတာ​လေ၊သူ့ကိုရိုက်​ရင်​လဲဘယ်​​တော့မှ​အော်​မငိုဘူး မျက်​ရည်​​လေးပဲ့ကြိတ်​ကြတာ။
ရွာထဲက က​လေး လူကြီးမှန်​သမျှသူ့ကိုသိပ်​ချစ်​ကြတာ။အားလုံးနဲ့တည့်​​အောင်​​ပေါင်းတက်​တာ။
သူမ​သေခင်​ ၅ရက်​​လောက်​ကမမနှင်း သတိ​ပေးသွားလို့သက်​မာစိုးသူ့ကိုတအားဂရုစိုက်​တာ။
ခဏအတွင်း​လေးမှာကို ဖြစ်​သွားတာ အခင်းဖြစ်​တဲ့​နေရာနဲ့သက်​မာစိုးတို့ရှိတဲ့​နေရာက တကွက်​ပဲ​ကျော်​တာမမရယ်​…ကျမက သမီး​ရေ..စံရတီ​ရေလို့​အော်​​ခေါ်​နေတာ သူမ​အေ့အသံကိုကြားမှာ ပြန်​ထူးမရလို့သာ
သိပ်​ရင်​နာဖို့​ကောင်းတာ…ဒီ​လောက်​က​လေးအရွယ်​ကိုသူမို့ရက်​ရက်​စက်​စက်​လုပ်​သွားတာ။ထားပါ​တော့ ကိုယ့်​သမီးက ၁၅နှစ်​၁၆နှစ်​ဆိုလဲ ​တွေးပြီးခံသာ​သေးတယ်​။ခု​တော့ မုဒိမ်းကျင့်​ပြီး သတ်​သွား​တော့အ​တော်​ကိုယူကြုံးမရဘူး လူယုတ်​မာကိုလဲတစ်​ခါမှမမြင်​ဘူးပါဘူး။
ဘေးကလူ​တွေက မလုပ်​နဲ့ က​လေးကို​ဆေးရုံ အရင်​ပို့ဖို့ရာလုပ်​ဆိုပြီးဆိုင်​ကယ်​နဲ့မတ္တရာ​ဆေးရုံ​ပြေးကြတာ…
ဒါ​ပေမယ့်​ မမနှင်းရယ်​ က​လေးက ​​​​အသက်​မရှိ​တော့ဘူးဆိုတာ ဆရာဝန်​​တွေ​ပြော​နေတာမမနှင်း​ကြားမှာပါ။
ဘာလို့ကျ​နော်​ဒါ​တွေ​ရေးရတာလဲဆိုတာ တချို့​တွေမညှာမတာ ​နဲ့ မိဘ​တွေဂရုမစိုက်​လို့
က​လေးမိဘ​တွေဘာလို့ထိုင်​ကြည့်​​နေတာလဲ သတ်​ပြစ်​ပါလား အပြစ်​တင်​​ပြော​နေကြတာရယ်​….
တချို့သတင်း​တွေမှာ က​လေးကိုမန္တ​လေး​ဆေးရုံမှာ​ဆေးကုသ​နေစဉ်​အတွင်း ​သေဆုံးသွားတယ်​လို့​ရေးထားတာ​တွေ့လို့ပါ။
တကယ်​က မန္တ​လေးကို ​သေမှတိုင်း ​ဆေးစစ်​ချက်​လုပ်​ရမယ်​​ပြောလို့​သယ်​သွားရတာပါ။
ဒီ​လောက်​ ၂နှစ်​၅လအရွယ်​က​လေးငယ်​ကို ရက်​ရက်စက်​စက်​​မုဒိမ်းကျင့်​ သတ်​ဖျက်​သွားတဲ့သူကို ​သေဒဏ်​မ​ပေးလို့ ဘယ်​လိုလူမျိုးကို​သေဒဏ်​​ပေးမလဲဗျာ။
Source – FB
သမီး​လေးကတဈ​ခါမှ ဒုက်ခ မ​ပေးဘူးဘူး
​မှေးဖှားစဉျ​ကာလ ​တောရှာဆို​တော့ ​ရမေ​ပေါကျ​ ကုနျးမ​ပေါကျ​ ဟိုဘကျ​ကမျးက​ဆေးရုံကိုသှားဖို့ရာအတှကျ​ခကျ​ခဲတာရယျ​၊​တော​ဆေးရုံဆို​တော့ခှဲ​မှေးဖို့​သှေးလို​တော့ ​သှေးလှူ မညျ့​အလှူရှငျ​ကို​စောငျ့​ရတရယျ​ဒါ​လေးဘဲခံခဲ့ရတာ​လေ…
မကျြ​​စေ့​အောကျ​က​နကေိုအ​ပြောကျ​မခံခဲ့ဘူး၊သကျ​မာစိုးက စာ​လေး​တှဘော​လေး​တှလေဲဖတျ​​တော့ က​လေးသူခိုး​တှေ​ကွောကျ​​တော့ ​ခြောငျးထဲ​ရခေတျ​သှားရငျ​ကို အိမျ​မှာက​လေးကို​သော့ခတျ​ထားခဲ့တာ။
​သော့ခတျ​ထားလို့ က​လေးငိုရငျ​ မ​သဘေူး ​လေ..
က​လေးသူခိုးတို့ ​ခြောငျးထဲ​ရနေဈ​မှာတို့ဆို စိတျ​ပူတာ​လေ၊သူ့ကိုရိုကျ​ရငျ​လဲဘယျ​​တော့မှ​အျော​မငိုဘူး မကျြ​ရညျ​​လေးပဲ့ကွိတျ​ကွတာ။
ရှာထဲက က​လေး လူကွီးမှနျ​သမြှသူ့ကိုသိပျ​ခဈြ​ကွတာ။အားလုံးနဲ့တညျ့​​အောငျ​​ပေါငျးတကျ​တာ။
သူမ​သခေငျ​ ၅ရကျ​​လောကျ​ကမမနှငျး သတိ​ပေးသှားလို့သကျ​မာစိုးသူ့ကိုတအားဂရုစိုကျ​တာ။
ခဏအတှငျး​လေးမှာကို ဖွဈ​သှားတာ အခငျးဖွဈ​တဲ့​နရောနဲ့သကျ​မာစိုးတို့ရှိတဲ့​နရောက တကှကျ​ပဲ​ကြျော​တာမမရယျ​…ကမြက သမီး​ရေ..စံရတီ​ရလေို့​အျော​​ချေါ​နတော သူမ​အအေ့သံကိုကွားမှာ ပွနျ​ထူးမရလို့သာ
သိပျ​ရငျ​နာဖို့​ကောငျးတာ…ဒီ​လောကျ​က​လေးအရှယျ​ကိုသူမို့ရကျ​ရကျ​စကျ​စကျ​လုပျ​သှားတာ။ထားပါ​တော့ ကိုယျ့​သမီးက ၁၅နှဈ​၁၆နှဈ​ဆိုလဲ ​တှေးပွီးခံသာ​သေးတယျ​။ခု​တော့ မုဒိမျးကငျြ့​ပွီး သတျ​သှား​တော့အ​တျော​ကိုယူကွုံးမရဘူး လူယုတျ​မာကိုလဲတဈ​ခါမှမမွငျ​ဘူးပါဘူး။
ဘေးကလူ​တှကေ မလုပျ​နဲ့ က​လေးကို​ဆေးရုံ အရငျ​ပို့ဖို့ရာလုပျ​ဆိုပွီးဆိုငျ​ကယျ​နဲ့မတ်တရာ​ဆေးရုံ​ပွေးကွတာ…
ဒါ​ပမေယျ့​ မမနှငျးရယျ​ က​လေးက ​​​​အသကျ​မရှိ​တော့ဘူးဆိုတာ ဆရာဝနျ​​တှေ​ပွော​နတောမမနှငျး​ကွားမှာပါ။
ဘာလို့ကြ​နျော​ဒါ​တှေ​ရေးရတာလဲဆိုတာ တခြို့​တှမေညှာမတာ ​နဲ့ မိဘ​တှဂေရုမစိုကျ​လို့
က​လေးမိဘ​တှဘောလို့ထိုငျ​ကွညျ့​​နတောလဲ သတျ​ပွဈ​ပါလား အပွဈ​တငျ​​ပွော​နကွေတာရယျ​….
တခြို့သတငျး​တှမှော က​လေးကိုမန္တ​လေး​ဆေးရုံမှာ​ဆေးကုသ​နစေဉျ​အတှငျး ​သဆေုံးသှားတယျ​လို့​ရေးထားတာ​တှလေို့ပါ။
တကယျ​က မန္တ​လေးကို ​သမှေတိုငျး ​ဆေးစဈ​ခကျြ​လုပျ​ရမယျ​​ပွောလို့​သယျ​သှားရတာပါ။
ဒီ​လောကျ​ ၂နှဈ​၅လအရှယျ​က​လေးငယျ​ကို ရကျ​ရကျစကျ​စကျ​​မုဒိမျးကငျြ့​ သတျ​ဖကျြ​သှားတဲ့သူကို ​သဒေဏျ​မ​ပေးလို့ ဘယျ​လိုလူမြိုးကို​သဒေဏျ​​ပေးမလဲဗြာ။
Previous post ကားများမှ ဘက်ထရီအိုးများ ဖြုတ်ယူခိုးယူနေတဲ့ တရားခံမိပါပြီ
Next post လားရှိုး မောက်တောင်းရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း မီးလောင်၊ ဆင်းတုတော်တဆူသာ ကျန်ရှိ